Waa kuwee Sanatarrada Hir-Shabeelle ee ku guuleystay Aqalka sare? | KEYDMEDIA ONLINE
Waa kuwee Sanatarrada Hir-Shabeelle ee ku guuleystay Aqalka sare?
Kursiga labaad waxaa ku baratamay, Nuur Maxamed Geedi Canjeex iyo Maxamed Cusmaan Dhega-Juun oo afartii sanno ee la soo dhaafay ka mid ahaa senatarada Aqalka Sare. Hayeeshee nasiibku uma oggolaan in mar kale uu ka mid noqdo Aqalka sare, waxaana kaga guuleystay Nuur Maxamed Geedi Canjeex oo markii ugu horeysay ka mid noqday Senatarada Aqalka Saree e Baarlamaanka Soomaaliya.
JOWHAR, Soomaaliya- Saddex ka mid ah kuraasta Aqalka Sare ayaa xalay lagu doortay xarunta maamulka Hir-Shabeelle ee Jowhar, kuwaas oo ay ku tartameen musharraxiin u hanqal taagayay inay ka mid noqdaan xildhibaannada Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
kursiga koobaad, ahaana kan ugu saameynta badnaa waxaa ku tartamay Muuse Suudi Yalaxow, Axmed Xasan Caddow (Daaci), Cabdllaahi Sheekh Xasan iyo Dr. Xasan Caddaay Cali. Taas oo ugu dambeyn ay guusha ku raaday Muuse Suudi Yalaxow oo mar kale ka mid noqday xildhibaannada Aqalka sare.
Nabadoonnada sida weyn looga yaqaan magaalada Jowhar ayuu kamid ahaa Nuur Canjeex, hore waxa uu uga tirsanaa shaqaalihii warshadii hore ee Sokorta SNAI-BIASA ee Jowhar.
Kursiga saddexaad oo ahaa kan ugu sahlan marka la eego kuwa kale ee sida weyn loogu tartamayay, ayaa waxaa isku hayay Fartuun Cabdulqaadir Faarax Karaama iyo Sacdiyo Yarow oo markii dambe u tanaasushay Fartuun Cabdulqaadir Faarax Karaama oo sidaasi mar kale ku noqotay sanatarka saddexaad ee ku soo baxa kursiga Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Wajiga labaad ee doorashada aqalka sare ayaa la filayaa in maanta ay ka bilaabato magaalada Jowhar, waxaana lagu loolami doonaa Saddex kursi oo kamid ah kuraasta dhiman.